Sawirka Dahabka ah ee Dahabka ah ee Pierre Loti Hill Fascinates Qof kasta | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMuuqaalka Dahabka ah oo ka yimid Pierre Loti Hill Enchants Qof walba
13 / 05 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
Muuqaalka Halic ee Pierre Hill wuxuu caan ku yahay qof walba
Markaad gaadho dooxooyinkaas, oo ah meesha ugu wanaagsan ee aad ka daawan kartaan muuqaalkaas caanka ah ee Geeska Dahabka; Kafee, oo loogu magac daray qoraaga caanka ah ee Faransiiska Pierre Loti, ayaa la gaadhay. Magaca dhabta ah ee Pierre Loti, oo ku nool Istanbul wakhti dheer isla markaana runtii ah Istanbul jecel, waa “Julien Viaud”. Qaxwaha taariikhiga ahi waa meesha ugu habboon ee aragtida gaarka ah lagu arki karo. Waxaa kale oo suurtagal ah in la fuuli karo buurta adoo wata koronto.
ku saabsan pier loti buur
Waxaa la sheegaa in Pierre Loti, oo u arkay inuu yahay waddankii labaad, uu yimid qaxwadaas oo loo yaqaan "Rabia Haweenka Kafee" oo uu ku qoray buuggiisa 'Aziyade' ee ka dhanka ah Dahabka Dahabka. Gobolka, oo ah halka 'asalka Turkiga' ee asalka ahaa dib loogu soo nooleeyay oo la sii nooleeyay maanta, wuxuu ka kooban yahay goobo loogu adeego tas-hiilaad dalxiis. Gobolka waxaa loogu yeeraa Buugga Safarka ee Evliya Travelelebi oo ah "Balaadhinta Balaadhinta Idiris".
Pierre Loti, oo ah waddo soo noqnoqda oo loogu talagalay dhammaan ajaanibta iyo musaafiriinta oo yimid Istanbul qarnigii 19aad, waxay leeyihiin dhismooyin badan oo taariikhi ah oo ku xeeran. Midkood waa Kaaggari Tekkesi alwaax oo leh laba qoraal, oo ku taariikhaysan 1813. Mar labaad, albaabka xarunta, dhismaha leh dhagxan cad oo wareegsan oo ku qoran afka Faaris ayaa ah Çolak Hasan Tekkesi. Dhismaha taariikhiga ah ee safka Tekke waa Iskuulka Caafimaadka. Qabrigii Mevlevi ee loo yiqiin "enderskender Dede", oo dhintey 1589, wuxuu ku yaal afaafka hore Mekteb iyo gudaha xarunta, oo uu dhisay İdris-i Bitlisi, oo sidoo kale ahaa qoraa taariikhiga ah ee Ottoman. Mid ka mid ah saddexda ceel ee horteeda İskender Dede ayaa ah ceelka si fiican loo yaqaan (ama ujeedada) Well. In the Evliya Çelebi Seyahatname ee ku saabsan ceelkan; Wuxuu qoray in "kuwa si fiican u fiiriya ay u arkaan rabitaankooda ceelasha". Qaybta sare ee xabaashu waa xabaalaha Saray “Atçıbaşı (Mirahur-Tuğ General) Ali Ağa iyo qoyskiisa. Intaa waxaa dheer, "Sarnıç", oo la rumeysan yahay in la dhisay xilligii Byzantine oo loo adeegsaday xilligii Cusmaaniyiinta, ayaa xajiya jiritaankeeda xarunta xarunta.
Sidee loo tagaa Pierre Loti Hill?
Hadaad raacayso gaarigaaga; Waxaa jira wado dhab ah oo loo maro Pierre Loti. Sidan, waxaad u fuuli kartaa buurta oo halkaas uga tegi kartaa gaadhigaaga, adoo ka tegaya baarkinka gaadhiga ...
Kuwa gaadiid la'aan ah ee ka soo jeeda dhinaca Anatolian dhinaca waxay si sahlan ugu fududaan karaan Üsküdar - Eyüp ferries. Waad fuuli kartaa buurta adoo kaxaynaya gaadhiga fiilada dekada.
Hadaad ku raacayso bas, waxaad u baahan tahay inaad ka degto Eyüp Sultan Stop si aad u tagto Pierre Loti oo aad ka kaxaysato gaadhiga fiilada.
Waxaad ku raaci kartaa gaariga fiilada leh ee loogu talagalay Pierre Loti Hill oo leh akbil ...
Qiimaha gawaarida ee fiilada korontada ee Pierre Loti
Si aad ugu tagto Pierre Loti Hill baabuur cable ah, waxaad geyn doontaa gaariga USB cable ee ay leedahay Dowlada Hoose ee Magaaladda Istanbul. Tan darteed, waad ku gudbi kartaa adoo u akhrinaya 'Kaarka' Istanbul sidii daabacaad caadi ah. Daabacaad kasta, kuwa haysta kaarka joogtada ahi waxay bixiyaan 2,60. In kasta oo barayaashu bixiyaan 1,85, qiimaha tikidhada ardayda waa 1,25.
Pierre Loti Cable Sawirro leh muuqaal gaar ah
Pierre Loti iyo Cable Caraf (Sawir Sawir - Video)
Eyüp-Pierre Loti-Miniaturk Nidaamka Baabuurta
Eyüp - Pierre Loti - Diyaarinta Mashruuca Nidaamka Gawaarida Gawaarida Miniatürk…
Gawaarida kabaha ah ee u dhexeeya Eyup iyo Pierre Loti waxay ku kordhin doonaan Minaturk
Eyüp-Pierre Loti-Miniatark Cable Car
Ogeysiiska Qandaraaska: Eyüp-Pierre Loti-Miniaturk Nidaamka Wareegga
Waa kuma Pierre Loti?
Taariikha Varda ee Taariikha ah
Kubbadda Haweenka Rabia
Qalabka dayax-gacmeedka ah ee shirkadda Sentepe
Booqo Baabuurka Isgaadhsiinta
Ku raaxeynta skiingka leh aragtida harada ee Bitlis